PUNSAA ?dowladda Puntland ha hir-geliso xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha si dhaqso ah? – Radio Daljir
PUNSAA ?dowladda Puntland ha hir-geliso xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha si dhaqso ah?
Janaayo 28, 2014 2:39 b 0
Garoowe, January 28, 2014 – Ururrada bulshada rayidka ee Puntland ayaa soo xiray shir looga hadlayey xuquuqda aadanaha iyo tan baragkacayaasha jooga gobolka, shirka oo ka dhacay Garoowe waxaa ka qayb galay in ka badan 70 xubnood oo laga soo xushay gobollada iyo dad kale oo iyana laga kaanay xerooyinka dadka baragkacay.
Shirka oo ahaa mid lagu soo bandhigayey fikarado la xiriira dhowrista xuquuqda aadanaha iyo habka loogu qareemi karo xuquuqda baragkacayaasha ayaa lagu tilmaamay mid guulaystay, dallada ururrada rayidka ee PUNSAA waxay sheegtay in fikradaha shirka ka soo baxay loo gdbin doono dowladda iyo hay?addaha gargaarka.
Bulshada rayidka ee Puntland ayaa dowladda ka dalbaday in la furo xafiiska xuquuqda aadanaha, kaas oo si wayn loogu baahan yahay, waxayna dalbadeen in la dhamaystiro xeerka xuquuqda aadanaha oo maamulkii hore sameeyey.
?75 qof oo halkan jooga codkooda waxaan ugu diraynaa madaxweynaha cusub ee Puntland uu sameeyo xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha, taas waxay ka mid ahayd balanqaadkii uu sameeyey xiligii doorashada.? Ayuu yiri Agaasimaha fulinta dallada PUNSAA Maxamed Cabdi Huruuse
Maxamed Cabdi ayaa hadalkiisa ku daray ?bulshada rayidka ee Puntland waxay dalbanaysaa in waxqabadka ugu horeeya ee dowladda laga dhigo furitaanka xafiiska xuquuqda aadanaha.?
Shirka xuquuqda aadanaha iyo tan baragkacayaasha ee Isniintii soo dhamaaday ayaa laga soo saaray fikrado kuwaas oo lagu dabaqayo qorshe howleedka iyo aragtida dadka si xog looga sameeyo loona gudbiyo, sida uu sheegay Agaasimaha fulinta ee PUNSAA
Waxaa jiray laba shir oo iyana dhamaaday toddobaadkii hore kuwaas oo ay ka qaybgaleen dad kala duwan oo laga soo aruurshay gobollada, waxaan shirarkaas iyagana diirada lagu saarayey samatabixinta deegaanka iyo hanaanka dimuqraadiyada oo Puntland hiigsanayso.
OLNF oo xaqiijisay inay tuhmayso rag lagaga afduubtay Nairobi in lagu hayo gudaha dalka Itoobiya
Madaxweyne Gaas oo baarlamanka ka dalbaday in si hufan loo wada shaqeeyo xilligan lagu jiro